နှင်းလျှောကာမျက်မှန်တပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆီးနှင်းကာမျက်မှန်တပ်ခြင်းငါဘယ်မှာစရမလဲ။ - ULLER
နိုဝင်ဘာလ 11, 2020
သင်ယခုရာသီ၌ဆောင်းရာသီအားကစား၌စတင်ရန်စဉ်းစားနေဆဲဖြစ်ပါကမည်သည့်နေရာတွင်စတင်ရမည်ကိုရွေးချယ်သောအခါသင်၏အကြိုက်များကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန်ဘယ်တော့မှမလွယ်ကူပါ၊ မည်သည့်ပုံစံကိုသင်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်လျှင်ပထမ ဦး ဆုံးဝယ်သင့်သည်ကိုနားလည်ရန်ဘယ်တော့မှမလွယ်ကူပါ။ မင်းရဲ့ နှင်းလျှောစီးမျက်မှန် ဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့ ဆီးနှင်းကာမျက်မှန်.
သင်သိသင့်သည်မှာသေချာသည်နှင့်သင်ကောင်းစွာသိလိမ့်မည်မှာ၊ နှစ် ဦး စလုံးသည်ဆီးနှင်းအားကစားဆိုင်ရာစည်းကမ်းများဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်သင်လုံးဝလေ့ကျင့်ရန်လိုအပ်သည့်အသုံးအဆောင်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့ပင်လုံးဝကွဲပြားသည်။ အထူးသဖြင့်ဤဆောင်းပါးနှင့်အတူဂန္ထဝင်နှင်းလျှောစီးနှင့်နှင်းလျှောစီးအကြားရှိအရေးကြီးသောကွဲပြားခြားနားမှုများကိုသရုပ်ဖော်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ နှင်းဆီပန်း။ ဒီနှစ်ခုနဲ့တစ်ခုရွေးတဲ့အခါသင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိလိမ့်မယ်။
အဓိကအရာက၊ နှင်းလျှောစီးတွင်ခြေထောက်တစ်ခုစီတွင်ဘုတ်တစ်ခုတပ်ထားပြီး၊ နှင်းများပေါ်တွင်ဘုတ်တစ်ခုတည်း၌ပြုလုပ်သည်ကိုသင်သိပြီးဖြစ်သည်။ ပုံစံနှစ်မျိုးလုံးတွင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအလားတူနည်းလမ်းဖြင့်လေ့ကျင့်ထားသည်၊ သို့သော်လက်တွေ့တွင်လှုပ်ရှားမှုများ၊ နည်းစနစ်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများသည်အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။
စာဖတ်ခြင်းအားဖြင့်ဆီးနှင်းအားကစားဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်မည်သည့်အရာနှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းရွေးချယ်ပြီးအကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ပါ နှင်းလျှောစီးမျက်မှန်ဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့ ဆီးနှင်းကာမျက်မှန်!
El နှင်းလျှောစီး ၎င်းသည် skier ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးများအပေါ်များစွာမူတည်သည်။ အစပြုသူများအနေဖြင့်တောင်စောင်းများ၌သင့်တော်သောအလယ်အလတ်ရှိပြီးအသင့်ရှိပြီးသင့်လျော်သည်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှလူတစ် ဦး ချင်းစီသည်ယုံကြည်မှုပိုမိုရရှိလာပြီးပိုမိုမြင့်မားသောအနိမ့်အမြင့်များရှိသည့်တောင်စောင်းများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဖြင့်သူ၏ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကိုလေ့ကျင့်ပေးသည်။ skier သည်အဓိကအားဖြင့်သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏အောက်ပိုင်းကိုယ်ခန္ဓာနှင့်အထက်ပိုင်းစွန်းကိုအနည်းငယ်လေ့ကျင့်ပေးသည်။ Skier သည်ကောင်းသောအပါအ ၀ င်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောပစ္စည်းအားလုံးကိုအမြဲသယ်ဆောင်ရမည် နှင်းလျှောစီးမျက်မှန်.
ရည်ရွယ်ချက်မှာပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်တောင်ပေါ်ရှိအတားအဆီးများအားလုံးပါ ၀ င်သည့်အန္တရာယ်များကိုအမြဲတစေသင်လမ်းပေါ်ရောက်သွားသည့်မညီမညာဖြစ်နေမှုများကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်အလေ့အထ၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ ယုံကြည်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ။ ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင်နှင်းလျှောစီးသည်အထူးစွန့်စားခန်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် မိုးပွင့် မရှိ, သို့မဟုတ်မည်သည့်ကိစ္စတွင်အတွက်, အခြားလမ်းအတွက်လေ့ကျင့်သည်။
နှင်းလျောစီးခြင်းတွင်လူ၏အောက်ပိုင်းကိုပိုမိုထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်ခြင်းပါဝင်သည်။ အထူးသဖြင့်သင်ကြားမှုစဉ်အတွင်းအလေးချိန်အားလုံးသည်သေးငယ်သောမျက်နှာပြင် (ဘုတ်) တွင်ကျပြီးအထောက်အကူတိုင်များမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်နှင်းလျှောစီးထက်လှုပ်ရှားမှု၏ဟန်ချက်ညီမှုနှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုစွမ်းရည်ပိုမိုလိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ပထမ ဦး ဆုံးမြေ၌အချိန်များစွာကုန်ဆုံးလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ လေ့ကျင့်ခန်းအလုံအလောက် ရှိ၍ နှင်းသည်နှင်းလျှောစီးခြင်းထက်လွယ်ကူသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင့်တွင်ပျဉ်ပြားတစ်ချောင်းသာရှိပြီး၎င်းတွင်ရှိသည့်နည်းစနစ်အားလုံးရှိသည်။ ရွေ့လျားမှုသည်နှင်းလျှောစီးသူများကဲ့သို့မရှုပ်ထွေးပါ။ နှင်းလျှောစီးသောအဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုရရှိခြင်းသည်နှင်းလျှောစီးထက် ပို၍ မြန်ပြီးမြန်သည်။
အကယ်စင်စစ်ဤနောက်မှသင်အံ့ will လိမ့်မည် ...Freeride ဆိုတာဘယ်လိုလဲ။
“ freeride” mode သည်စိမ်းလန်းစိုပြေသောနေရာများမှထွက်ခွာသွားပြီးအပျိုစင်နှင်းဖုံးဒေသများကိုသင်အလွန်အစွမ်းထက်။ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းသောအတွေ့အကြုံများဖြင့်ရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း skiers များ၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုတိုးပွားစေသောဤဆွဲဆောင်မှုပုံစံသည်လူတို့၏ဘဝကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်ဤစည်းကမ်းကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရန်ကောင်းသောနေရာများကိုရှာဖွေခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်ဟုယုံကြည်သောကြောင့်၊ ။ အချို့သောဘူတာများကဤဝယ်လိုအားကိုတုံ့ပြန်ကြသည် Vallnord သို့မဟုတ် Grandvalirafreerider များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည့်နေရာများ၊ ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံမှုဆိုင်ရာကိရိယာများနှင့်အပျိုစင်မြေအနေအထားကိုလေ့လာရန်သင်ယူနိုင်သောနေရာများရှိသည်။
အမှု၌သင်တို့ကိုအံ့ were ခဲ့ကြ ... Arcalís, Vallnord ဘူတာရုံအတွက်, လက်ရှိအတွက်အရေးအပါဆုံးညွှန်းဆိုတစ်ခုဖြစ်သည် freeride နှင်းလျှောစီး အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်း၏အခြေအနေသည်လေအားကာကွယ်ရန်သဘာဝအရကာကွယ်ရန်၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောခရီးစဉ် ၁၃၀ ကျော်နှင့်နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကျင်းပသောကြောင့်ဤပုံစံအောက်တွင်စွန့်စားမှုများပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သတိပြုသင့်သည်မှာနှစ်စဉ် Vallnord တွင် FWT သို့မဟုတ် Freeride ကမ္ဘာ့ခရီးစဉ်.
နင်၎င်း၏ for ည့်သည်များအားအရည်အသွေးမြင့် Freeride နှင်းလျှောစီးကိုကမ်းလှမ်းရန်အတွက်အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်။ သူတို့သည် Grandride ပြိုင်ပွဲကိုဖန်တီးပြီးနိုင်ငံတကာနှင်းလျှောစီးစမ်းသပ်မှုလမ်းကြောင်းသို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ၄ င်းတို့သည်ကျောင်း၏အပိုင်းအသစ်ဖြစ်သော Freeride စင်တာကိုတီထွင်ပြီးတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အုပ်စုလိုက်အတန်းများပါ ၀ င်သည့်အဝေးမှဆင်းသက်လာသူများအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသည်။ သင်၌လည်းပျော်မွေ့နိုင်သည် နင် Ski Safari အထုပ်၏အကောင်းဆုံးခရီးစဉ်များနှင့်သင်နှင့်အတူလိုက်ပါမည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မော်နီတာများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း။
တကယ်တော့, Freestyle ပြိုင်ပွဲ၏ Total Fight Masters ပြိုင်ပွဲဟာဒီမြို့မှာအကြီးမားဆုံးပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး Andorran နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းမှာအကောင်းဆုံးနှင်းလျောစီးသူနှင့် freeski မြင်းစီးသူရဲတွေကိုအတူတကွစုဝေးစေပါတယ်။ နင်.
El Tarter Snowpark သည်စစ်မြေပြင်တွင်အံ့မခန်းဖွယ်ခုန်ချမှုများနှင့်ပျော်စရာများပြည့်နှက်နေသည်။ ဤအဖြစ်အပျက်သည်ကမ္ဘာ့နှင်းလျှောစီးခရီးစဉ်အားကြယ် ၅ ပွင့်နှင့် AFP ဆားကစ် (professional freestyle circuit) ၏ရွှေအမျိုးအစားပါဝင်ပြီး slopestyle ၏စည်းကမ်းအတွက်ကမ္ဘာ့ပြက္ခဒိန်တွင်ရည်ညွှန်းခန့်အပ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
slopestyle mode မှာနှင်းလျောစီးပြိုင်ပွဲဥရောပတောင်ပိုင်းတွင်အမြင့်ဆုံးမြင်းစီးသူရဲတို့၏အကူအညီဖြင့်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်သည်ကြယ်ငါးပွင့်ဖြစ်သောကမ္ဘာ့စနိုးဘုတ်စီးခရီးစဉ်ကို (အများဆုံးဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်ကြယ်ခြောက်ပွင့်မှ) ထိန်းသိမ်းထားပြီးဖြစ်သည်။
သင်စိတ်ဝင်စားလျှင် မိုးပွင့်အဆိုပါ နှင်းလျှောစီး သို့မဟုတ် ဖရီးဒီနည်းလမ်းကိုသင်လေ့လာနိုင်သောကောင်းမွန်သောဆိုဒ်အချို့ကိုဒီမှာဖော်ပြထားသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်တစ်နေရာရာမှာသင်ကျင့်သုံးပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျှဝေရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးသောအခါသင်မည်သည့်နေရာတွင်စတင်သည်ကိုအရေးမကြီးပါ၊ အရေးကြီးသည်မှာကျွန်ုပ်တို့အားလှုပ်ရှားမှုတွင်တွေ့မြင်ရန်ဖြစ်သည်။
စည်းမျဉ်းမရှိဘဲအားကစား? ကောင်းပြီ ... Freeride နှင်းလျှောစီးလေ့ကျင့်ခန်းမှာလွတ်လပ်မှုတချို့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်လွတ်လပ်မှုပိုကြီးလေ၊ တာ ၀ န်သာလေဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိရပါ။ သင့်ကိုသင်ပေးသောအကြံဥာဏ်ကိုလိုက်နာပါ
အရင်ကအမြင့်ဖျားနာခြင်းအကြောင်းကိုသင်ကြားဖူးပါသလား။ ဤသည်မှာနှုတ်အားဖြင့်ပြောသောနာမတော်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြင့် ၂၄၀၀ မီတာအထက်တွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံစားရသောရောဂါလက္ခဏာများကိုလက်ခံရရှိသည်။ ကောင်းသော
Enduro ဆိုတဲ့စကားလုံးဘယ်ကလာသလဲသိလား။ ခံနိုင်ရည်ကိုဆိုလိုသည်။ ပြီးတော့ MBT ရဲ့ဒီပုံစံကခုခံမှု၊ မြန်နှုန်းနဲ့လွတ်လပ်မှုတို့လိုအပ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါး၌တည်၏